Xiaomi Mi 9 Lite: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilowga | Androidsis
Xiaomi Mi 9 Lite ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Toddobaadkii hore waxaa la xaqiijiyay in Xiaomi Mi 9 Lite uu aadayo jooga maanta Sebtember 16. Nooca Shiinaha ayaa nooga tagaya taleefankiisa cusub dhexdiisa inta u dhexeysa. Horay ayaa loogu xamanayay in qaabkani noqonayo nooc caalami ah oo CC9 ah in sumaddu soo bandhigtay dhowr toddobaad ka hor. Tani waa sidaas, qayb ahaan, maxaa yeelay waxaa jira isbeddelo qaarkood.
Xiaomi Mi 9 Lite wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo ka dhexeeya telefoonka kale ee la soo bandhigay toddobaadyo ka hor. Inkasta oo ay tahay nooc ka duwan isla waqtigaas. Nooca Shiinaha ayaa sii wadaya inuu u oggolaado kala duwanaantaan inay la koraan moodooyin cusub Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo ku saabsan taleefanka hoose.
Naqshadeynta ayaa wali ah iyada oo aan la helin isbeddelo badan marka la barbar dhigo CC9. Qeyb ka mid ah dhibic biyo ah shaashadeeda iyo xagga dambe ayaan ka helaynaa kamarad saddex-laab ah. Maaddaama ay aad iyo aad u badan tahay, dareeraha faraha ayaa ku yaal shaashadda qalabka hoostiisa.
Xiaomi Mi CC9 iyo Mi CC9e durbaba waa rasmi: dhammaan faahfaahinta halkan
1 Tilmaamaha Xiaomi Mi 9 Lite
Tilmaamaha Xiaomi Mi 9 Lite
Xiaomi Mi 9 Lite wuxuu la kulmaa waxa aan ku aragno wax badan oo ka mid ah heerka dhexe ee hadda jira. Waxay ku isticmaashaa processor-ka caadiga ah qaybtan suuqyada waxayna diiradda saareysaa kamaradaha ay wataan, maadaama horeyba caan u ahayd. Guud ahaan, waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar tayo leh oo suuqan ku jira. Intaa waxaa sii dheer, sida caadada u ah astaanta Shiinaha, waxay la imaan doontaa qiimo la heli karo, taas oo ah waxa shaki la'aan kicinaysa xiisaha badan ee isticmaalayaasha. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
MUUQAAL 6.39-inch AMOLED oo leh FullHD + xalka 2.340 x 1.080 pixels iyo 19.5: 9 saamiga (430 nits)
PRORESOR Snapdragon 710
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 64 / 128 GB
CHAMBERS Gadaal: 48 MP (f / 1.79) + 8 MP 118 darajo xagal ballaadhan + 2 MP (f / 2.4) bokeh / Xagga hore: 32 MP oo leh AI iyo Pixel Binning
BATARY 4.030 mAh oo leh 18 W lacag degdeg ah
Isku xirnaanta Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac dual band / Bluetooth 5.0 / A-GPS / GLONASS / NFC
Qiyaasaha iyo Miisaanka 156.8 x 74.5 x 8.67 milimitir iyo 179 garaam
Shaki la'aan, kamaradda hore waa mid ka mid ah walxaha sida aadka ah u taagan on this Xiaomi Mi 9 Lite. Calaamadda Shiinaha ayaa taleefanka ku isticmaasha dareeraha 32 MP, kaas oo kuu oggolaanaya inaad sawirro aad u fiican ku qaadatid taleefanka mar walba. Sensello saddex-geesle ah ayaa nagu sugaya dhabarka taleefanka, oo leh 48 MP aaladda ugu weyn, taas oo horeyba ugu caan baxday taleefannada hadda jira ee suuqa. Dhammaan kaamirooyinka taleefanka ku shaqeeya waxaa ku shaqeeya sirdoon macmal ah.
Dareeraha faraha ayaa ku yaal shaashadda hoosteeda, wax aan la qabsanay marba marka ka dambeysa. Shirkaddu waxay nooga tagaysaa baytari wanaagsan oo taleefanka ah, 4.030 Mah Mah, oo ay weheliso processor-keeda iyo adeegsiga Android Pie waa inay siisaa ismaamul wanaagsan. Intaa waxaa sii dheer, waxay la timaaddaa amar deg deg ah, taas oo ah dhinac kale oo muhiim ah oo ku saabsan qadarka dhexe ee hadda jira ee Android.
Sumadda ayaa xaqiijisay taleefanka ayaa la bilaabayaa bishan, ugu yaraan mid ka mid ah labadiisa nooc. Maaddaama Xiaomi Mi 9 Lite loo bilaabay laba nooc oo ah xagga RAM iyo kaydinta. Marka adeegsadayaashu waxay awoodi doonaan inay doortaan nooca taleefankan ay u arkeen inuu yahay midka ugu xiisaha badan kiiskooda.
Nooca 6/64 GB ee taleefanka ayaa si rasmi ah loo sii deyn doonaa 30ka Sebtember. Wuxuu ku yimid Spain qiimo dhan 319 euro, sida ay xaqiijisay shirkadda lafteeda. Inkasta oo nooca Xiaomi Mi 9 Lite oo leh 6/128 GB la soo saari doono bisha Oktoobar oo dhan, iyada oo aan lahayn taariikh cayiman hadda, oo leh qiime dhan 349 euro.
Kuwa xiiseynaya qalabka waxaad ku iibsan kartaa seddex midab: Aurora Blue, Onyx Black iyo Pearl White. Waa midabada aan ku aragnay sawirrada taleefanka. Iyagu waa kuwa kaliya ee laga heli karo dukaamada. Waxaan ka iibsan karnaa meelaha caadiga ah ee lagu iibiyo sumadda Shiinaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi Mi 9 Lite ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Muuqaalka 'Outlook' wuxuu helayaa taageerada POP3 kaliya 30 sano kadib markii la soo saaray
LG waa shirkadda siisa qalabka OLED taxanaha Huawei ee Mate 30